Funaanadaha clothing Dharka xayaysiiska ah • farshaxanimada kumbuyuutarka ee P&M
Shaati waa dhar tayo sare leh oo si wanaagsan ugu shaqeeya dharka dadka firfircoon, shaqaalaha ama ardayda. Maaliyadaha funaanadaha ayaa sannado badan aad caan u ahaa. Caalamnimadooda iyo dabacsanaantooda ayaa inta badan ku kordhisay baahintooda.
Shaati-gashiga ayaa labadoodaba loo isticmaali karaa dharka shaqaalaha sidoo kale sheyga xayeysiinta.
Waxaa lagu gartaa isku-duubnaan sare, taas oo si weyn u ballaarinaysa kala duwanaanshaha codsiyada. Hodannimada soo-bandhigista T-shirts-ka ayaa kuu oggolaanaya inaad iibsato kala duwanaansho kala duwan, midabyo, qaabab iyo, wax walba oo ka sarreeya, cabbirro.
Shaati-sharafeedyada caadiga ah ka sokow, waxaannu ka digaynaa funaanado ay si xamaasad leh u doorteen wakiillada saadka, shirkadaha maraakiibta iyo shirkadaha dhismaha.
Waxaan bixinnaa badeecooyin kala duwan si qof walba uu u helo badeecad dabooleysa baahidooda. Waxaan leenahay noocyo fasallo kala duwan ah - heer tayo iyo heer sare ah.
Thanks to tayo sare leh, waxay qancin doonaan xitaa macaamiisha aadka u badan ee dalbata. Sida kuwa kale alaabta - Funaanadaha ayaa shaqsi ahaan loo adeegsan karaa daabacaadda kumbuyuutarka lub daabacaadda shaashadda.
Isla mar ahaantaana, waa in la xasuusnaadaa in kiisaska embroidery, garaafyada leh cufnaanta sare ee aag aad u yar aan lagula talin. Dhinackeena Thanks to sannado badan oo waayo-aragnimo ah iyo adeeg takhasus leh, waxaad ka heli kartaa caawimaad xagga kala duwanaanta ugu mas'uul ah.
Waxaan sidoo kale bixinnaa qiimayaal tartan iyo fulin deg deg ah. Waxaan kugu casuumeynaa inaad hesho xigasho bilaash ah.
Miisaanka ugu fiican ee funaanad
Maaliyadaha iyo funaanadaha, si loogula xiriiro tayada iyo xirfadda, waa inay ahaadaan kuwo waara oo raaxo leh, gaar ahaan markaan rabno inaan dul dhigno shirkad ama sumadda naadiga.
Funaanadaha ku yaal dukaankeennu waxay ka samaysan yihiin waxyaabo culus, oo ka dhigaya kuwo u adkaysta waxyeellada.
Xitaa maydhista soo noqnoqota ma laha wax khatar ah. Dharku wuxuu hayaa qaabkiisii ​​asliga ahaa toddobaadyo badan, taasoo ka dhigaysa maalgashiga alaabtani inay faa'iido leedahay.
Maaliyadaha funaanadaha ah ayaa laga heli karaa annaga dukaan laga sameeyay agab tayo sare leh oo la jaan qaada isticmaalaha una oggolaanaya isaga xorriyadda dhaqdhaqaaqa. Aruurinta T-shirts oo ku saleysan tikniyoolajiyadda fal-gal ee 'ACTIVE-DRY' ayaa u qalma fiiro gaar ah. Waxay ku shaqeeyaan xitaa xaalado aad u xun halkaas oo ay jirto halis sare oo dhidid xad dhaaf ah.
Dhameystirka taxaddarka leh ee qalabka, iyo sidoo kale sida saxda ah ee faahfaahinta, waxay ka dhigaan dhar ka shaqeyn doona duruufo badan.
T-shaati ayaa si xamaasad leh loogu isticmaalaa dharka shaqaalaha, gaar ahaan go'an, tusaale ahaan alaabada dharka ee xilliyada qabow, sida tusaale ahaan. dhogorta, laakiin sidoo kale loola dhaqmo sidii qalab shirkadeed oo loogu talagalay macaamiisha ama qandaraasleyaasha.
Isticmaalkooda dharka daabacaadda sidoo kale waa lagu dabaqi karaa inta lagu gudajiro noocyada kala duwan ee dhacdooyinka ama abaalmarin ahaan tartamada. Dhammaanteed waxay kuxiran tahay fikradda sumadda. Waa hab dhaqaale ahaan lagu xaqiijiyo raaxada naftaada iyo dadkaaga qaata, isla mar ahaantaana waxaad siisaa dulsaar magacaaga.
T-shirts iyo T-shirts la soo jeediyay ayaa si qoto dheer looga hadlay.
Dhamaadka qurxinta qalabka ayaa ka dhigaya dhar ka shaqeyn doona warshado badan oo kala duwan. Maaliyaddu waxay la jaan qaadayaan sawirka, laakiin ma xaddidayaan dhaqdhaqaaqa ama ma keenaan raaxo darro.
Maaliyaddan waxaa ka mid ah moodallo loogu talagalay ragga, haweenka, carruurta iyo kuwa guud - unisex. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad doorato cabirka saxda ah. Moodooyinka milicsiga ayaa ah koox gaar ah oo alaabooyin ah, taas oo ay ugu wacan tahay in la kordhiyo heerka nabadgelyada ee goobta shaqada.
Annagu waxaan kuu adeegsan karnaa xulashada iyo shaqsi ahaaneed ee badeecooyinka. Waxaan leenahay garoon mashiin sareeya oo na siiya shaqo hufan iyo tayo sare u leh macaamiisheena.
Moodooyinka oo dhan ayaa laga iibsan karaa dukaankayaga internetka www.pm.com.pl ama dukaankeena ku yaal Allegro "PRODUCER-BHP".
Hadaad rabto inaad aragto tusaalayaasha xijaabka, fadlan booqo tab ku saabsan firmie.
funaanado daabacan oo loo yaqaan 'esro'funaanado decathlon oo daabacanfunaanado qabowhalkaas oo funaanadaha la daabacayhalka laga iibsado funaanado daabacanhalka laga gato funaanado leh daabacaad kuu gaar ahhalkaas oo aad ka iibsan karto funaanado daabacanhalkaas oo aad ka dalban karto funaanado leh daabacaad kuu gaar ahhalkaas oo aad ku sameyn karto funaanado daabacanhalka ugu wanaagsan ee lagu dalban karo funaanado leh daabacaad kuu gaar ahhalka laga dalbado funaanado daabacanhalka laga dalbado funaanado leh daabacaad kuu gaar ahhalka laga sameeyo funaanado daabacanimisa ayey ku kacaysaa soo saarista funaanad daabacanImmisa ayey ku kacaysaa sameynta funaanad daabacansida loo dhaqo funaanado cadcad oo daabacansida loo dhaqo funaanado daabacansida loo birtayo funaanadaha la daabacaysida loo sameeyo funaanado daabacansida loo sameeyo funaanado daabacanFunaanado3-funaanadofunaanado socda oo daabacanfunaanadaha haweenkafunaanado dumar oo daabacanfunaanadaha dumarka oo aad ku daabacan tahayfunaanado loogu talagalay carruurta oo daabacanfunaanado ordaya oo daabacanmiro funaanado gogo 'daabac lehfunaanado caafimaad oo daabacanfunaanadaha raggafunaanadaha ragga oo daabacanfunaanadaha ragga oo leh daabacaad 3d ahfunaanado mootoT-shaati jimicsigafunaanado caado ahshaati nbagogosha dumarkafunaanadaha kubbadda cagtafunaanado kubbadda cagta oo daabacanmaaliyadaha kubada cagta oo aad ku daabacayso adigashaararka polo oo daabacanFunaanado kooxda Polish ahfunaanado ku shaqee daabacfunaanadaha isboortigafunaanado isboorti oo daabacanfunaanado isboorti oo leh daabacaad kuu gaar ahfunaanadaha kuleylka lehFunaanado Thermoactive leh daabacanT-shaati oo daabacanfunaanado la daabacay 3dFunaanado leh daabacaadda 'esro'Funaanado ay ku daabacan tahay sawirka Białystokfunaanado ay ku daabacan yihiin dumarkafunaanado ay ku daabacan yihiin carruurtaT-shaati oo leh daabacaadda GdańskT-shaati oo daabacan halka laga iibsanayoT-shaati oo daabacan meesha la dalbanayofunaanado lagu daabacay sida loo sameeyoT-shaati oo leh daabacado sida aabe, wiilT-shaati oo leh daabacaadda KatowiceT-shaati oo leh daabacaadda Krakowfunaanado leh daabac doonT-shaati oo leh daabacaadda Lublinfunaanado ay ku daabacan yihiin raggafunaanado daabacanT-shaati oo leh daabacaadda olsztynT-shaati oo leh daabacaadda daabacaaddaT-shaati oo leh daabacaadda dadkaT-shaati oo leh daabac daabac lehFunaanado ay ku qoran tahay daabacaadda WarsawT-shaati oo leh shaashadaadaFunaanado funaanad leh wrocławFunaanado ay ku qoran yihiin qoraalloFunaanado lagu daabacay wadanifunaanado aad ku daabacan tahayFunaanadaha oo leh shaashad iyaga u gaar ah oo ah esiiroT-shaati oo aad ku daabacayso KrakowT-shaati oo leh daabacaad adiga kuu gaar ahT-shaati oo daabacaaddaadu ay jaban tahayT-shaati oo leh shaashaddaada WarsawFunaanado aad ku daabacan tahay 'wrocław'funaanado waaweynDaabacaadda funaanadbirta funaanadahanaqshad t-shaatifunaanado qosol badanfunaanado qosol leh oo daabacanfunaanado jaban oo daabacanfunaanado jaban oo daabacaad kuu gaar ah leh